Andraikitra voafetra orinasa - Namorona ApS ny dimy ambin'ny folo min. Price an-tserasera avy amin'ny kr - Ny mpahay lalàna any Danimarka. Rehetra ny mpisolovava an-Tserasera
Andraikitra voafetra orinasa - Namorona ApS ny dimy ambin'ny folo min. Price an-tserasera avy amin'ny kr
Anpartsselskabet no tena ampiasaina endriky ny orinasa ao Danemarka, ary amin'ny ankapobeny dia mankafy kokoa ny fitokisana eo amin'ny raharaham-barotra noho ny hafa karazana orinasaMamorona ny ApS mora foana sy haingana ara-Dalàna ny Latabatra, ary aoka isika hikarakara ny fisoratana anarana sy ny fanamafisana ny share renivohitra. Amin'izao fotoana izao, ny renivohitra ny fepetra takiana ho an'ny anpartsselskabet nampidinina avy. ary ny manana endrika koa efa lavitra kokoa ara-toekarena hita ho an'ny mpandraharaha. Anpartsselskabet dia fantatra tsara ihany koa ny habeny ao ny zavatra raharaham-barotra fiaraha-monina sy tia be fitokisana amin'ny samy mpanjifa ary koa ny mpamatsy. Rehefa hamorona ny ApS ny alalan ny Birao ara-Dalàna, dia afaka misafidy na dia ny manome noho ny fisoratana anarana ao ny zavatra raharaham-barotra fahefana izany-ny rafitra. Tsy te-hisoratra anarana ny orinasa, tolotra ara-Dalàna ny Latabatra mba ho azo antoka na ny fisoratana anarana sy ny fandraisana ho mpikambana ny share renivohitra.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa mikasika ny ao amin'ny fizarana"Iray ny tena tombony ny orinasa voafetra dia fa izany no miantoka ny tompon'ny voafetra madio orinasa momba ny orinasa ny trosa.
Midika izany fa ianao dia ho toy ny tompony ihany no mety ny vola fa tsy maintsy mavitrika nanapa-kevitra ny hitifitra ho any amin'ny orinasa ao ny endriky ny renivohitra taty aoriana, Raha tianao ny raharaham-barotra manana ny vaovao ny mpampiasa vola na iray vaovao miaraka amin'ny mpandraharaha, izay afaka mora foana ho nafindra ny mizara ho azy.
Ao amin'ny izany lalana izany ihany koa tsotra kokoa ny hivarotra ny orinasa manontolo, raha toa ka tianao izany Anpartsselskabet lasa misaraka ara-dalàna ny olona iray, izay ihany koa ny mety ho tombony amin'ny momba ny fandoavam-bola ambany orinasa hetra Anpartsselskabet no tena ampiasaina endriky ny orinasa ao Danemarka, nahoana no tsy tia kokoa ny fitokisana amin'ny mpanjifa, ny mpamatsy sy ny mpiara-miasa Raha misy ny fanondrotana renivola ho an'ny orinasa - na amin'ny endrika fampindramam-bola na ny fampiasam-bola - izany dia matetika mora kokoa amin'ny voafetra ny orinasa Rehefa baiko ny orinasa antontan-taratasy ny alalan ny Birao ara-Dalàna, dia mahazo ny antontan-taratasy ilainao mba hanangana ny andraikitra voafetra orinasa: ity tahirin-kevitra Ity dia mamaritra ny fepetra momba ny fananganana ny orinasa.
Izany no hita, 'ny-panorenana, izay ny tompony (ny mpamorona), sy ny fomba ny renivohitra ny orinasa (orinasa mizara) dia zaraina eo ny tompony, raha misy maro tompony.
Misy ihany koa ny efa voalaza, izay tokony hipetraka ao amin'ny orinasa ny fitantanana (mpanatanteraky ny birao ary misy filankevi-pitantanana), ary avy izay daty, ny orinasa dia tsy maintsy ho mavitrika.
Ity tahirin-kevitra ity dia mamaritra ny fitsipika ho an'ny orinasa sy ny asa.
Ny fanekem-ny fikambanana misy, ohatra, ny tanjona fa izay manana ny orinasa, ny fomba ny orinasa ara-bola taona mitantana, tsy maintsy misy ny filankevi-pitantanan'ny orinasa, ary koa ny fomba ny orinasa tompony dia afaka manao fanapahan-kevitra momba ny orinasa.
Mba handray ny mpanorina ny tahirin-kevitra sy ny lahatsoratra ny fikambanana dia tsy maintsy mameno ny endrika an-tserasera.
Eto ihany koa dia tsy maintsy maka toerana raha toa ka ara-Dalàna ny Birao dia tsy maintsy misoratra anarana ny orinasa miaraka amin'ny dikanteny raharaham-barotra ny fahefana, na raha toa ianao na te-hanao izany. Ny orinasa dia tsy maintsy ho voasoratra ara-panjakana ny anarana raharaham-barotra ny fahefana mba hahazoana fahefana, ary noho izany dia afaka mandray ny CVR maro. Na inona na inona izay manao ny fisoratana anarana, mitaky ny zavatra raharaham-barotra fahefana ny fisoratana anarana saram-ny kr. Raha te-hividy Birao ara-Dalàna ny fisoratana anarana amin'ny asa fanompoana ianao, dia mifidy fotsiny izany ao amin'ny endrika. Izany ny vola lany dkk ary izahay no handray ny fikarakarana rehetra ho anao, eo amin'ny lafiny roa ny fisoratana anarana sy ny fandraisana ho mpikambana voasoratra anarana renivohitra. Mariho tsara fa raha toa ka hisafidy ny hiara-hijoro ho ny fisoratana anarana, tsy maintsy ihany koa ho azo antoka ny hahazo ny banky mba hanamafy ny renivohitra ny orinasa.
Azonao atao ny mamaky bebe kokoa mikasika ny lahatsoratra momba Rehefa nahavita ny endrika sy ny karama ho an'ny mpanorina ny tahirin-kevitra sy ny fitsipiny, dia ho avy hatrany ny mandray ny antontan-taratasy izay vonona ny ho sonia ny mpanorina na ny mpamorona.
Sonia mora foana sy soa aman-tsara amin'ny NemID, rehefa izay ny antontan-taratasy dia azo tehirizina ao amin'ny tsirairay underskrivers manokana tahiry amin'ny legaldesk. Teny an-dalana anao mandrakariva ny fahafahana hahazo ny tahirin-kevitra. Raha efa voafidy ara-Dalàna Latabatra.
Nohavaozina ny toe-piainana, ny lalàna sy ny fitsipika ho an'ny seafreight